'Casa de Pueblo' epholileyo entliziyweni yeLlucmajor - I-Airbnb
'Casa de Pueblo' epholileyo entliziyweni yeLlucmajor
Imbali "Casa de Pueblo Mallorquina" entliziyweni ye-LLucmajor. Iimitha ezingama-200 ukusuka kwi-'Plaza Central del Pueblo ', indawo ethandekayo apho unokufumana zonke iinkonzo eziyimfuneko ukuze uhlale uzolile kwaye umnandi.
Le projekthi yobuqu yaqala ngoFebruwari ka-2018 kwaye ngoJuni ka-2019 ndivula iingcango zayo ukwabelana ngendawo enqabileyo, ehlaziyiweyo kunye nesitayile apho uya kuba nokuhlala kamnandi. Lonke uthando kunye nomzamo owenziwe kule ndlu ndibeka esandleni sakho ukuba uyonwabele njengoko ndisenza ...
Indlu ineendawo ezi-4 ezichazwe ngokugqibeleleyo.
Kwelinye icala kukho indawo evulekileyo ebandakanya igumbi lokuhlala kunye nekhitshi. Le nxalenye inokwandiswa kweemitha ze-square ze-65 kwaye inendlu yokuhlambela yesibini yendlu.
Zombini igumbi lokuhlala kunye nekhitshi lixhotyiswe ngokugqibeleleyo ngayo yonke into efunekayo ukuze uhlale ukhululekile kwaye ukhuselekile. Ukongeza koku, igumbi lokuhlala lincediswa yindawo yangaphandle ye-8 square metres apho unokonwabela ubusuku obufudumeleyo besiqithi okanye uthathe ilanga lasekuseni njengoko lijongiwe ukuze libe nokukhanya kwelanga ngqo imini yonke. Kwakhona indawo engaphandle ineshawari apho unokupholisa khona ngelixa ugcakamela ilanga okanye ngelixa unesnack kunye nesiselo esitsha.
Kumgangatho wokuqala uya kufumana amagumbi amabini okulala. Ngamnye wabo uxhotyiswe ngebhedi ephindwe kabini. La mabini amagumbi abanzi kakhulu. Eyona nto iphambili inokwandiswa kweemitha ze-square ezingama-25 kunye negumbi lokuhlambela ngaphakathi kwaye igumbi lesibini linamamitha angama-square angama-20.
Ekugqibeleni, indlu inomgangatho ongaphantsi malunga ne-25 square metres.
I-LLucmajor yidolophu ekumazantsi esiqithi saseMallorca. Indawo yayo icwangciswe kakhulu kwaye ilungile ukuba ujonge ukubaleka kwi-agglomerations yonxweme. Ilungile kuba kwiradiyasi emalunga nama-20km uneendawo ezininzi ezinomdla.
IsiXeko sasePalma sinokufikelelwa kwimizuzu eyi-15-20 njengoko kunjalo nge-25km ukusuka eLlucmajor kwaye kukho indlela
Olona lwandle lukufutshane luyi-12km ukusuka eLalini kwaye malunga nemizuzu engama-20 kude yi-Es Trenc Natural Park, apho unokuchitha khona iintsuku ezimangalisayo kwiilwandle zayo kunye nobusuku obumangalisayo e-S'Embat okanye e-Esperanza Restaurant.
Malunga ne-15km kude ungafumana iilwandle ezincinci ezimangalisayo ezifana ne: Cala Pi, El Delta, Cala Blava.
Kanye emva kweLlucmajor, malunga ne-7km kude yilali eyimbali yaseRanda kwaye unyuka intaba uya kufumana iSantuari del Cura. Indawo entle apho unokonwabela indawo yokutyela kunye nemibono emangalisayo. Ngaba uthanda ukukhwela ibhayisekile le yenye yezona ndawo zidumileyo kwesi siqithi. Ungayishiya indlu ngebhayisekile yakho kwaye unyuke uye encotsheni yentaba. Ikufutshane kwaye uhambo luhle kakhulu.
Kubathandi beGalufa, kwi-5km kwifomu yedolophu yaseLlucmajor ungafumana i-Son Antem Golf Resort.
UMzantsi weSiqithi udume kakhulu njengoko unezona lwandle zibalaseleyo. Ukusuka eLlucmajor ungaqhuba yonke indlela ezantsi ukuya eSantanyi (Ezona lwandle zityebileyo: Cala Llombards, Calo d'es moro, Cala Santanyi, S'almunia, Es Caragol.). Kumalunga ne-25km ukusuka endlwini yam kunye nomgama ofanelekileyo wokuyonwabela imini kwaye ubuye ngokuhlwa uzokufumana isidlo esimnandi ePlaça d'Espanya. Njengoko benditshilo isikwere esikhulu saseLlucmajor, iPlaça d'Espanya, yimizuzu emi-3 yokuhamba ukusuka ekhaya. Unokhetho olwahlukeneyo lweendawo zokutyela (zamaTaliyane, iMeditera, indawo yokutyela yeentlanzi kunye neetapas eziqhelekileyo zaseSpain).
Izinto ezibonwayo kunye nezinto ezinomtsalane eLlucmajor
Izakhiwo zenqaku ngaphakathi kwidolophu yaseLlucmajor zibandakanya iCawe yaseSant Miquel ukusuka kwi18th Century, iholo yedolophu ukusuka ngo-1884, kunye necawe yaseSant Bonaventure ukusuka kwi17th Century. Konke kumgama olula wokuhamba omnye komnye. Ezinye iindawo ezinokuthi zityelelwe kulo mmandla ziquka iCapocorb Vell, indawo yokuhlala yeBronze Age Talayotic eye yanconywa njengenye yeelali ezibalulekileyo zembali kwintshona yeMeditera.
Izehlo eLlucmajor Village:
Imakethi ibanjwa kathathu ngeveki ePlaça d'Espanya ngolwesiThathu, ngoLwesihlanu nangeCawe kusasa. Apha uya kufumana imveliso yasekhaya evela kwisiqithi esijikelezileyo. Iialmondi kunye neeapilkosi zikhula kwidolophu yonke kwaye zenza ukuthenga okulungileyo kunye nobugcisa obuyilwe ekuhlaleni kunye nobugcisa.
USeptemba yinyanga enkulu kwidolophu yaseLlucmajor, njengoko imiboniso ephambili ibanjwa kwiimpelaveki ezintathu zilandelelana. Lindela imiboniso yobugcisa kunye nemisebenzi yezandla, yezolimo nemfuyo, ukutya kwasekhaya, ukhuphiswano lwezemidlalo, umculo, ukudanisa nokunye. Yonke into inendawo kule miboniso echonga idolophu yaseLlucmajor. Umboniso wokugqibela 'Es Firo' ngowona mkhulu kwaye ungcono.
Ngexesha lokuhlala kwakho ungandifumana nangaliphi na ixesha kwinombolo yam yobuqu (+34 639.784.339)
Inombolo yomthetho: L12E5387